Yan Aung: အားလုံးပျော်ရွှင်ကြစေရစ် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၈...
အားလုံးပျော်ရွှင်ကြစေရစ် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၈...
နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးလို့ နှစ်သစ်ကို ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီဗျာ.
ကျွန်တော်လည်း နှစ်ဟောင်းရဲ့ အကြွင်းအကျန် ပို့စ်ဟောင်းတွေ ပြီးပြတ်အောင် ရေးလို့ နှစ်သစ်ကို ဘလော့ဂ်ပို့စ်အသစ်လေးတွေနဲ့ ကြိုဆိုဖို့ စိတ်ကူးနေခဲ့တာ ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး အလုပ်တွေများနေတာနဲ့ ပို့စ်မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး. ဘယ်ကိုမှလည်း မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး.
ကိုယ့်ဆီဗုံးလေးထဲ ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ လာပြီး နှုတ်ဆက်ထားကြတာ၊ Happy New Year Wish လေးတွေ လုပ်ထားကြတာလေးတွေ တွေ့ရပြီး ရင်ထဲမှာ ပြောမပြတတ်အောင် ၀မ်းသာကြည်နူးမှု ဖြစ်ရပါတယ်.
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော် ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းကိုလည်း ဂုဏ်ယူကျေနပ်မိပါတော့တယ်.
အခု ပို့စ်ရေးချင်စိတ် ရှိနေပေမယ့် အချိန်က တော်တော်လင့်နေပါပြီ. မနက်ဖြန် အလုပ်ကို အစောကြီး ထသွားရဦးမှာမို့ ပို့စ်အသစ်လေးတွေကို မနက်ဖြန်ကျမှပဲ လာရောက်ဖတ်ရှုပါတော့ ခင်ဗျာ…
အမှတ်တရအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီဗုံးလေးထဲမှာ လာအော်သွားကြတဲ့ msg လေးတွေကို စုစည်းတင်ပြရင်း အားလုံးအားလုံးသော စာဖတ်ပရိသတ်၊ ဘလော့ဂါချစ်မိတ်ဆွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှများ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ အထူးစပါယ်ရှယ် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ကြောင်းပါ ခင်ဗျားးးးး…
1 Jan 08, 21:15
mahjubah: Happppppppppy Neww Yearrrrrrrrrrrrrrr 2008 Ko Yan Aung!
1 Jan 08, 12:01
မေပျို: ကိုရန်ရေ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ;-)
1 Jan 08, 10:37
ညီလင်းသစ်: ကိုရန်အောင်ရေ...ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
1 Jan 08, 09:27
wahgyi: Happy New Year n Wishing you All The Best !
1 Jan 08, 06:51
မောင်မှော်: ကိုကြီးရန်ရေ- နှစ်သစ်ကူးမှာ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ပျော်ရွင်မှုအသစ်၊ အောင်မြင်မှုအသစ်တွေရရှိနိုင်ပါစေဗျာ။
1 Jan 08, 05:52
သွင်မောင်: ¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•` နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ♥•.¸ ¸.••.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•
1 Jan 08, 05:47
လုလု: .¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•` မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ကိုရန်အောင့့့့် ပျော်ရွှင်ပါစေနော် .¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•`
1 Jan 08, 05:16
lynnlynn: Happy New year !!!!!!!!!!!!
1 Jan 08, 05:15
lynnlynn: Happy New year !!!!!!!!!!!!!
1 Jan 08, 04:40
Smilemay: နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းသားခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
1 Jan 08, 04:38
1 Jan 08, 04:37
j: Happy New Year လာခဲ့နော်
1 Jan 08, 04:32
အောင်သူ: Happy New Year!!!
1 Jan 08, 04:29
1 Jan 08, 04:28
သားဖြိုး: ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာလွယ်အိတ်ကလေးကိုလည်း လာမွှေပေးပါအုံးခင်ဗျ။
1 Jan 08, 04:27
သားဖြိုး: နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကံကောင်းခြင်း ခြေလှမ်းတွေ စနေပီလားဗျ။
1 Jan 08, 04:23
မင်းကျော်: .¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•` မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေခင်ဗျာ။ ♥•.¸ ¸.••.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•
1 Jan 08, 03:07
minnyoonthit: မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ပါ ကိုရန်ရေ :)
1 Jan 08, 00:30
၀င်္ကပါ: အကြွေးတွေအကုန်ဆပ်နေတာပေါ့လေကိုရန်အောင်က။ Happy New Year ပါနော်။
1 Jan 08, 00:28
Yan>: အားလုံးအားလုံးပဲ Happy New Year ပါခင်ဗျာ. ကျွန်တော်အခုမှပဲ အပြင်က ပြန်ရောက်ပါတယ်. တယ်ရင်းတွေနဲ့ အလည်လွန်သွားလို့. ဟတ်ဟတ်. ပို့စ်စရေးနေပြီဗျာ. နည်းနည်း mood ၀င်သွားအောင် အပြင်ထွက်လည်လိုက်တာ.
31 Dec 07, 23:29
ရတနာစိုး: ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်ပါရှင်
ရတနာစိုး: အစ်ကိုရေ . .. စာလာဖတ်ရင်း အစ်ကိုပြောတဲ့ ၃၁ရက်နေ့မှတ်တမ်းလေးအကြောင်း ရတနာ ရေးထားကြောင်းအကြောင်းကြားပါတယ်
31 Dec 07, 23:17
Mr.Pooh: ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ နှစ်သစ် ၂၀၀၈ ဖြစ်ပါစေဗျာ
31 Dec 07, 22:56
နှင်းပွင့်လေး: •.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•` HAPPY HAPPY NEW YEAR - 2008 ♥•.¸ ¸.••.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•
31 Dec 07, 21:45
mtj: မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ကိုရန်ကြီး
31 Dec 07, 21:05
ပီကေ: ကိုရန်ရေ၊ •.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•` HAPPY NEW YEAR - 2008 ပါ
31 Dec 07, 20:52
31 Dec 07, 20:51
ရွှေဂျမ်း: Happy New Year!!
31 Dec 07, 20:43
31 Dec 07, 20:42
skyslight: bye bye 2007 & Welcome 2008 Happy New Year!!!
31 Dec 07, 20:16
ညလေး: မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ဦးဦးရန် ပျော်ရွှင်ပါစေ....ဗျာာာာာာာာာာာာာာ
31 Dec 07, 17:40
အိမ့်ချမ်းမြေ့: ကိုရန်ရေ. မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါရှင်
31 Dec 07, 16:57
tu tu: Happy New Year!!! ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ...
31 Dec 07, 16:27
home: Happy new year 2008....ko yan aung
31 Dec 07, 15:35
ကိုထွဋ်: မင်္ဂလာရှိသော ၂၀၀၈ ပါ , Wish youaHappy New Year !
31 Dec 07, 13:15
ရှမ်းကလေး: နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ ခင်ဗျား..ပို့အသစ်တင်ထားပါကြောင်း
31 Dec 07, 12:12
ဆိုးသွမ်း: .¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•` မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေခင်ဗျာ။ ♥•.¸ ¸.••.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•
31 Dec 07, 11:31
ချစ်လေပြေ: ပျော်ရွှင်ဖွယ် မင်္ဂလာ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ ကိုရန်ရေ၊ Happy New Year
31 Dec 07, 10:46
Myo Kyaw Htun: Happy New Year 2008 !!! Mr. Yan
31 Dec 07, 09:39
khunmyahlaing: •.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•` မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေရှင် ♥•.¸ ¸.••.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•
31 Dec 07, 08:29
Blazing inferno: I have already sent the song..check out youremail bro
31 Dec 07, 08:28
Blazing inferno: •.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•` HAPPY NEW YEAR - 2008 ! ♥•.¸ ¸.••.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸
31 Dec 07, 08:11
ဟိန်းမောင်: ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများဖြင့် အတိပြီးသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ...။
31 Dec 07, 07:14
သားဖြူ: Hoping Nu Year..2008!
31 Dec 07, 07:10
မေပျို: ကိုရန်အောင်ရေ သဲစီဘောက်စ်ကို မဖတ်သွားဘူးသိလား။ ၀င်လည်း ကြည့်ဝူးနော်။
31 Dec 07, 06:42
thanhtut: ကိုရန်ရေ နှစ်သစ်မှာ အောင်မြင်မှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ Happy newyear
31 Dec 07, 06:27
31 Dec 07, 06:04
Alvin: မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ခင်ဗျာ... 恭賀您新年快乐
31 Dec 07, 05:43
ဂျစ်တူး: ရန်အောင်ရေ .. ၃၁ ဒီဇင်ဘာရက်များဟာ လာဖတ်ဦးဟေ့း)
31 Dec 07, 04:53
သဇင်ဏီ: နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ.. အောင်မြင်မူတွေရရှိပါစေရှင့်
31 Dec 07, 04:43
thinker: ဟက်ပီးတဲ့ နယူးရီးယားပါ
31 Dec 07, 04:10
sint: Hi KO YAN AUNG HAPPY NEW YEAR PAR
thamudaya: happy new year!!!!!!!
31 Dec 07, 01:49
Yan>: ကျွန်တော် Tag ထားတာကိုလည်း ရေးကြဦးနော့ ဖတ်မိသူတိုင်း၊ ဒီဆီဘောက်စ်ကို ၀င်ကြည့်သူတိုင်းလည်းပါတယ် ဟတ်ဟတ်. 31 DEC မှတ်တမ်းများပါတဲ့ဗျာ. ကျွန်တော်လည်း နက်ဖြန်ရေးပါဦးမယ် အိပ်ပြီဗျို့...
31 Dec 07, 01:48
Yan>: အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျား ကျွန်တော်လည်း နှစ်ဟောင်းက Tag ကြွေးများကို ရှင်းလင်းခဲ့ပြီမို့ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်စက်အနားယူပါတော့မယ်ဗျား... နောက်နေ့တွေ့မယ် တယ်ရင်းတို့ရေ. ဘိုင်....
31 Dec 07, 01:24
31 Dec 07, 00:39
စိန်မမ: ညီမလာဘူးနော်စီဘောက်စ်ကို ဟီးး နှစ်သစ်မျာပျော် ရွှင်ပါစေ
30 Dec 07, 23:07
Smilemay: နှင်းစက်တွေနဲ့အတူဆောင်းရောက်ရင် ချစ်ရတဲ့သူတွေကို ခွဲခွာရတာများမယ်
30 Dec 07, 22:32
30 Dec 07, 22:04
yamin: မောင်လေးရန်ရေ... အမ ရေးချင်တာတွေ ရမ်းသန်းပြီး ရေးပြီးကွ လာကြည့်ဦး ဟဲဟဲ
30 Dec 07, 21:12
မောင်လူအေး: Happy New Year In-Advance!!! ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေဗျာ...
၂၀၀၇မှာ ဘလော့ဂ်စလုပ်တော့ ကိုရန်အောင့်ဆီက အကူအညီတွေ အများကြီး ယူခဲ့ရပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကကို မကျွမ်းကျင်တာကြောင့် သိပ်အချိုးမကျပါဘူး။ )
အဲဒီ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောရင်း Happy New Year နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မပန်းနွယ်. Same to you too!
...? ... ? ... ?
ဘားမားပွိုင့် သုံးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားသ...
ဘလော့ဂ်တွင် ဇယားကွက်လေးများ ထည့်သွင်းခြင်း...